Imiceli mngeni kwezendalo kulo nyaka nakwimeko ezayo! | Ukuhlaziywa okuluhlaza
UTomàs Bigordà | | Ihlaziywe 29/05/2017 00:15 | Ukonga umbane, I-ecology, Umoya ovuselelekayo, Yendalo, Itekhnoloji entsha
Kunanini na ngaphambili kwimbali yoluntu, sinako izandla zethu kwikamva yeplanethi njengoko siyazi kwaye sijamelana nothotho lwemiceli mngeni kwezendalo.
Emva koko siza kubona ukuba zeziphi ezi ngxaki kwaye enzima ukuba bangazisa.
1 Eyona mingeni iphambili kwindalo esingqongileyo
2 Ukwanda kwabemi
3 Ukuxhatshazwa okugqithisileyo
4 Ukuphela kweMithombo yeziMbiwa
5 Ikamva lehlabathi lisezandleni zethu
Eyona mingeni iphambili kwindalo esingqongileyo
Kule minyaka ilishumi idlulileyo sibona imiceli mngeni eliqela songela ikamva lethu njengoluntu:
Ukukhula ikhawulezisiwe yabemi.
El ukudinwa oovimba bezimbiwa.
Ukuxhatshazwa okugqithisileyo Izixhobo zokuloba kunye nokuncwina kweelwandle.
Ukunyuka kwe ngco liseko zomhlaba kunye namanzi.
Ukuphela kwamaninzi iintlobo.
Ukukhutshwa ngobuninzi kwe Igesi yendlu eluhlaza greenhouse ebangela ukufudumala kwehlabathi.
Nge-30 ka-Okthobha ka-2011 sigqithe kubemi be-7000 bhiliyoni emhlabeni
Ngo-2016 sele bedlulile kwi-7400 kwaye ngoku sele singaphezulu kwe-7500 yezigidi (7.504.796.488 kanye ngexesha lokubhalwa kwale posi ngokwe Iindlela zomhlaba).
Ngokwezibikezelo ezisemthethweni, kwi-2050 kwaye ukuba akukho nto itshintshayo, kunokwenzeka ukuba i-10.000 yezigidigidi iya kufikelelwa.
I-10.000 yezigidi zabantu abaza kufuna ukutya, ukusela, ukunxiba, ukuhamba, ifama, njl.
Oko kubeka uxinzelelo kwindalo kunye nezixhobo ezingakaze zibonwe ngaphambili. Umzekelo weziphumo zokonyuka kwabemi kwi Iinkqubo zendalo sinayo ekulobeni.
Njengokuthanda izinto zokupheka kuye kwanda nge-epicurean kwaye jikelele, ukuthanda i-sushi kunye nokutya kwaselwandle kunye neentlanzi ngokubanzi ziye zanda kwihlabathi liphela.
Amazwe afana neSpain apho intlanzi yayisele iyinxalenye kubalulekile ekudleni kwethu, inyuse kuphela oku kusetyenziswa kwaye yenze yabanzi ngakumbi.
Ukuphuculwa kweziseko ezikhoyo kuye kwenza ukuba kube lula uku yitya intlanzi entsha naphi na kwilizwe. Kodwa le meko iye yanda kuwo wonke umhlaba, ibangela ukuba iinqanawa zokuloba ziye kuloba kwiindawo zokuloba ezikude ngakumbi.
Ingxaki kukuba oku kudalwa kuchaphazele amandla okuzala kweelwandle, ngendlela yokuba kude kufikelela inqanaba eliphezulu ukubambisa kuzo zonke iindawo zokuloba zomhlaba.
Esi sisiphumo esihlala sivela ngendlela efanayo; Njengokuba iintlanzi zisiya kwindawo ethile, imveliso yentlanzi kuloo ndawo iyanda ide ifikelele kwelona liphezulu emva koko ukubanjiswa kwehlayo kungabuyeli ukufikelela ubuninzi kwakhona.
Ewe, ngo-2003 yayisele ifikelele kwelona thuba liphezulu kuzo zonke iilwandle zehlabathi. Kungenxa yesi sizathu sokuba iifama zeentlanzi zande njenge ngenye indlela ukuhla kokubanjiswa kwiilwandle.
Leyo yinkcazo yento esinokuyifumana ezininzi iintlobo kubathengisi beentlanzi ababengatyiwa kude kube yiminyaka embalwa edlulileyo.
Ukuphela kweMithombo yeziMbiwa
Iplanethi yethu inobukhulu kunye a ubungakanani oovimba abazimiseleyo nabagqibeleleyo. Indlela yokusetyenziswa kwezixhobo, ukwenza ngathi akuhoyi ukuba bazakudinwa, ukongeza ngokungakhathali, ayifanelekanga ngokuthe ngqo kwizizukulwana ezizayo.
Nje ukuba kukhutshwe izimbiwa emhlabeni, ayinakuphinda ikhutshwe. Yiyo loo nto ukusetyenziswa ngokufanelekileyo into eyenziweyo ibaluleke kakhulu kwaye ekuphela kwento enokumisela ikamva kukusekwa kwenkqubo qoqosho isetyhula yokwenyani ngendlela yokuba aba vimba abangasetyenziswanga kodwa basetyenziswe.
Oku akuthethi nje kuphela ukuba izinto ziphinde zenziwe kwakhona, kodwa ukuba xa zikhona uyilo kunye nokwenza Sele ithathelwe ingqalelo ukuba emva kokusetyenziswa kwezi zixhobo zingenakuhlaziywa kufuneka zikwazi ukusetyenziswa kwakhona.
Ikamva lehlabathi lisezandleni zethu
Inyani yile yokuba ngaphandle kwazo zonke ezi ngxaki zibonakala zingenakwenzeka kwindalo esingqongileyo kwaye ngaphandle kwazo zonke ezi zoyikiso ze-apocalyptic, namhlanje sinazo izixhobo ezingaphezulu kunangaphambili ukoyisa yonke le mingeni.
Ulwazi lokuba kukho namhlanje okwenzekayo kuthi, kutheni kusenzeka kuthi kwaye sifumana njani isisombululo inkulu kunangaphambili.
Sinezandla zethu izixhobo zokukhulisa enye indlela yophuhliso. Mhlawumbi kungenxa yesi sizathu kunye nolunye uhlobo lokungaqondakali okuvela kuThixo, thina ngabo kufuneka sijongane nomceli mngeni omkhulu ongazange wabonwa ngabantu ngaphambili:
Utshintsho lwemozulu olubangelwa ukufudumala kwehlabathi kubangelwe yimizamo yethu yokukhupha i-carbon dioxide ngendlela egwenxa kule minyaka ili-150 idlulileyo.
Iindaba ezimnandi zezokuba singabo isizukulwana sokuqala ukubanazo izixhobo zokumisa esi sisongelo kunye nokulungisa indlela yethu yokuhlala kulo mhlaba usiya kulowo uphepha uninzi lweziphumo ezibi.
Okubi kukuba mhlawumbi siya kuba ngabokugqibela Ekwenzeni isicelo kunye neziqinisekiso zempumelelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Imingeni yendalo esingqongileyo yowama-2017
Phantse i-30 isalinde amatyala okusika kumandla ahlaziyekayo kwi-ICSID